Ngubani uMarko owabhala iVangeli?
Umbhalo weVangeli NgokukaMarko akuchazi ngokukodwa umntu njengombhali. Akukho "uMarko" ochongiweyo njengombhali - inkolelo, "uMarko" unokudibanisa uluhlu lwesiganeko kunye namabali kumnye umntu owabaqokelela, wawahlela, wawabeka phantsi kwifomu yeendaba ezilungileyo. Kwaye kwada kwinqanaba le-sibini ukuba isihloko esithi "NgokukaMarko" okanye "IVangeli NgokukaMarko" kwakuxhomekeke kule xwebhu.
Phawula kwiTestamente Entsha
Inani labantu kwiTestamente eNtsha - kungekhona nje kwiZenzo kodwa nakwiileta zikaPauline zithiwa nguMarko kunye nabani na kubo babenokuba ngumlobi wale vangeli. Inkolelo inokuthi iVangeli NgokukaMarko ibhalwe phantsi nguMarko, umhlobo kaPetros, owamane wabhala oko uPetros ayekushumayela eRoma (1 Petros 5:13) kwaye lo mntu wayechazwe "noYohane Marko" IZenzo (12: 12,25; 13: 5-13; 15: 37-39) kunye "noMarko" kuFilemon 24, kwabaseKolose 4:10, naku-2 Timoti 4: 1.
Kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba onke la maMarko ayenjalo kuMarko, kuncinci umlobi wale vangeli. Igama elithi "uMarko" livela rhoqo kwisikumkani saseRoma kwaye kwakuya kuba nomnqweno onamandla wokudibanisa le vangeli kunye nomntu osondele kuYesu. Kwaye kwaqhelekile kule minyaka ukubonakalisa ukubhala kwiimpawu ezibalulekileyo zexesha elidlulileyo ukwenzela ukuba banike igunya elininzi.
I-Papias & Iimfundiso ZamaKristu
Yilokho imvelaphi yobuKristu isinikezele, nangona kunjalo, nokuba yinto enobulungisa, yinto ehamba phambili ekude kakhulu - kwiincwadi zika-Eusebius malunga nomnyaka we-325. Yena, wathi, uthembele emsebenzini ovela kumbhali wangaphambili , UPapas, umbhishophu waseHerapolis, (c.
60-130) obhala malunga nale minyaka engama-120:
"Marko, ukuba ube nguguquli kaPetros, wabhala ngokuchanekileyo nayiphi na into ayikhumbulayo into eyathethwa okanye eyenziwa yiNkosi, nangona kungenjalo."
Izimangalo zikaPapias zisekelwe ezintweni awayezithethayo eziva ku "Presbyter." U-Eusebius ngokwakhe akayithembekanga ngokupheleleyo, nangona wayenokungabaza ngoPapias, umbhali obonakala ngokugqithiseleyo. U-Eusebius ubonisa ukuba uMarko wafa ngomnyaka we-8 wokubusa kukaNero, okuza kwenzeka ngaphambi kokufa kukaPetros - ukuphikisana nesithethe sokuba uMarko wabhala ngamabali kaPeter emva kokufa kwakhe. Kuthetha ntoni "itoliki" kulo mongo? Ngaba i-Papias iyaphawula ukuba izinto azibhalwa "ukuze" zichaze ukuchasana nezinye iincwadi zeevangeli?
Imvelaphi yamaRoma kaMarko
Nangona uMarko engathembeli kuPetros njengomthombo wezinto zakhe, kukho izizathu zokuthi uMarko wabhala eRoma. Ngokomzekelo, uClement, owafa ngo-212, no-Irenaeus, owafa ngo-202, ngaba ngabafundisi becawa bebandla lokuqala babesekela uMarko. UMarko ubala ixesha ngeendlela zamaRoma (umzekelo, ukwahlula ubusuku kuba ngamawashi amane kunokuba abe mathathu), kwaye ekugqibeleni, unolwazi olungafanelekanga kwi-geography yasePalestina (5: 1, 7:31, 8:10).
Ulwimi lukaMarko luqulethe "i-Latinisms" yamagama-mboleko ukusuka kwisiLatini ukuya kwisiGrike - okuya kubonisa ukuba abaphulaphuli banokukhululeka ngakumbi ngesiLatin kunesiGrike. Ezinye zeziLatini ziquka (isiGrike / isiLatini) 4:27 i-modios / i-modius (umlinganiselo), 5: 9,15: legiôn / legio (legion), 6:37: dênariôn / denarius (imali yaseRoma), 15:39 , 44-45: i-kenturiôn / centurio (i- centurion ; zombini uMathewu noLuka basebenzisa i-ekatontrachês, igama elilinganayo kwisiGrike).
Imvelaphi yamaYuda kaMarko
Kukho ubungqina bokuthi umbhali kaMarko wayenokuba ngumYuda okanye wayenomYuda. Abaphengululi abaninzi bathi iindaba ezilungileyo zinomdla wokuzimela kwi-Semitic, apho zithetha ukuba zikhona iimpawu zesiSomitic ezibonakalayo kwiimeko zamaGriki nezivakalisi. Umzekelo weli lizwi elithi "ukunambitheka" lithetha izenzi ezisekuqalekeni kwezivakalisi, ukusetyenziswa okubanzi kwe-asyndeta (ukubeka amacandelwana ngaphandle kokuhlanganiswa), kunye neparataxis (ukujoyina izigaba ngokudibanisa ngei, oku kuthetha "kunye").
Abaphengululi abaninzi namhlanje bakholelwa ukuba uMarko wayesebenza kwindawo efana neTire okanye iTsidon. Sondele ngokukhawuleza ukuya eGalili ukuba siqhelane namasiko kunye nemikhwa yawo, kodwa kude kakhulu ukuba iifayile ezibandakanyayo aziyi kuphakamisa ukusola nokukhononda. Ezi zixeko ziya kuba nazo zihambelana nenqanaba lemfundo elibonakalayo lombhalo kwaye libonakala liyazi kakuhle izithethe zamaKristu kwiindawo zaseSiriya.
IVangeli NgokukaMarko, Isahluko 13
Ukuguqulwa kukaYesu (Marko 9: 1-8)
UYesu Uhamba Ngomxholo Wesifundo seBhayibhile Yamanzi
Iimbali zeeNgxelo zeeNtsholongwane zaseUnited States
Ukuzikhethela kunye neNkundla ePhakamileyo
Indlela yokudibanisa "Jouir" (ukuze ujabule) ngesiFrentshi
I-Military Colt M1911 yasePistol
Isikhokelo sokuPhumela i-Patenting ne-USPTO Izicelo zePentent
Ngaphambi Kokuya: I-Towton Battlefield
Indlela uRhulumente aphucula ngayo iBucycling Safety
Indlela yokukhonza ngokusemthethweni kwiTable Tennis / Ping-Pong
Iingoma ezi-10 eziphezulu ze-Halloween
Indlela yokuLawula i-Top 5 Challenges of Breathing in Freestyle Swimming
Hun & Po Ethereal and Soul Corporeal In Taoism
Iilwimi zesiTaliyane: iSognare
Kutheni Kuthiwa Amanzi Angaphezu Kakhulu Kuneqhwa?
Indlela yokufaka isicelo seCasino Credit
Amelia Ulahlekile: Ubomi Nokudlulela kwe-Amelia Earhart
I-Tarantulas Idla ntoni?
Iqonga eligqibeleleyo I-Practice-3-Ball-And-Runs
Ziziphi Iingelosi Zesiqinisekiso?